University of Paris-Sud - Study in France. Imfundo eYurophu
University of Paris-Sud Yokuxhumana
isifinyezo : UPS
Ungakhohlwa xoxa University of Paris-Sud
Bhalisa at University of Paris-Sud
Ngenxa eyunivesithi ucwaningo ebanzi spectrum eliqondisa izigwegwe,
University of Paris-Sud is ikakhulukazi elibonakalayo ezingeni eliphezulu yocwaningo zalo eziyisisekelo, ephawuleka kakhulu kwi-mathematics ne-physics. In Health Sciences, ucwaningo yayo kuye kwaba nemiphumela ocebile futhi siyathela innovation zokwelapha in a inqwaba emikhakheni yezokwelapha. Law Its, Economics and amaqembu Management afeze ucwaningo original kakhulu emikhakheni efana ubuchwepheshe obusha kanye emisha. Ekugcineni, inqwaba zokucwaninga imikhakha eyahlukene nazo eyenziwa emikhakheni efana ezemidlalo kanye motricity womuntu, Ngokwesibonelo. Konke lokhu msebenzi ucwaningo senzeka laboratories asetshenziswa esikhathini esiningi nezinhlangano zocwaningo emikhulu ehlanganisa CNRS, Inserm futhi Cea, ogama ukuhileleka uye kakhulu ngcono idumela international ezijatshulelwa ucwaningo izikhungo zethu.
Paris-Sud University yaziwa akuyona kuphela ucwaningo yayo kodwa futhi ibanga kanye ezihlukahlukene izifundo zakhe kanye nezinhlelo,
kokubili eyala academic at Bachelor, Master sika, kanye namazinga PhD, futhi ekuqeqesheni lobuchwepheshe. lwezifundo multidisciplinary ngemfundiso osekelwa ucwaningo ukusika-onqenqemeni okuhlangana ngayo imfundiso ezintsha ukuze anakekele ezihlukahlukene labafundi zifiki onyakeni wokuqala kulabo ukwenza imfundo yempilo yabo yonke. Inhlelo ukugxila ezidingweni somphakathi, ngisho ezingeni zobudokotela, ekuqeqesheni abafundi bakwazi ukungena kwimakethe yokuphehla umsebenzi. ephilayo yeNyuvesi kungemalengiso futsi isimo sokusebenza inikeza abafundi kanye nososayensi abasha ngezisusa izimo kungenzeka yokuthola state-of-the-art ulwazi kanye namakhono futhi ngijabulela ukuphila student.
Njengoba isikhungo ne izimpande emphakathini,
Paris-Sud University uhlakulela ubuhlobo obuseduze umkhakha futhi ubangela emisebenzi ngokusebenzisa ulwazi olutholwe abacwaningi zayo. Inyuvesi futhi uyazifeza imisebenzi ehlukahlukene zokusiza abantulayo. Lezi kungaba zesayensi kanye technical, noma wobuciko, noma inhlanganisela yalokhu okubili, ngekuhambisana “Science-Amasiko-Society” imisebenzi okwamanje isakhiwa. Kanye umphakathi nyuvesi, lelifaka ekhatsi abasebenzi nabafundi, umgomo wethu ezilalelini kuhlanganisa izikole kanye nomphakathi jikelele.
Akhiwe endaweni ezehlukile zesayensi,
Paris-Sud University, kanye nazo zonke ezinye ephakeme ezemfundo nocwaningo nozakwethu endaweni, isebenzela ukwandisa ukubonakala international ngokusebenzisa iphrojekthi Paris-Saclay University, lapho kuba umdlali enkulu. Ngesikhathi esifanayo, amaplani uhlelo olunzulu isakhiwo iye yalungiselela Paris-Sud University ithuba eliyingqayizivele ukuhlanganisa isikhundla salo phakathi emayunivesithi omhlaba anothile futhi eminye ngcono sikhalo salo kubafundi senyuvesi, abacwaningi, kanye nabasebenzi ezobuchwepheshe nezokuphatha. Nampa abantu abafanelwe udumo isithunzi nobuhle Paris-Sud University.
Jean Monnet Faculty inikeza imfundo nokuqeqeshwa umthetho, ezomnotho kanye nokuphathwa ukuze phezu 6,000 abafundi kumasayithi ezimbili, seal – Fontenay-aux-Roses futhi Orsay.
Izifundo kuthiwa umsebenzi ngamakhasimende ne Ukugcizelelwa komthetho futhi isicelo ukuphathwa. Ezinye zalezi siklanyelwe ukuhlangabezana nezidingo zabanye amakhono, izikole kanye nezikhungo (isayensi yezempilo, imvelo nezemidlalo).
Ucwaningo igxile umthetho inkontileka, umthetho omusha ubuchwepheshe, umthetho umphakathi, uhlu lwezincwadi zeBhayibheli umthetho, emisha kanye inethiwekhi ezomnotho kanye inhlangano ukuphathwa.
Isikhungo yeKambiso Izifundo siqeqesha abafundi yokwamukelwa emugqeni Versailles kanye National School of yeMantshi (ENM).
4,200 abafundi baqeqeshiwe ngesikhathi Paris-Sud Faculty of Medicine kumasayithi ahlukahlukene: the Bicêtre, Paul Brousse futhi Antoine Béclère Izibhedlela, i-Gustave-Roussy Institute, I Marie Lannelongue Ukuhlinzwa Centre, the Vallee Foundation, futhi Southern Ile-de-France Isibhedlela Centre.
Kanye degrees kwezokwelapha, Faculty inikeza eziyisithupha degrees Master kanye nezifundo at ezintathu zobudokotela Izikole, Public Health School, uMnyango Yokuziphatha, kanye uMnyango labonesi Ezemfundo.
Ucwaningo sehlukaniswe ucwaningo lwezempilo, iqhutshwe izibhedlela; ucwaningo eziyisisekelo, kwenziwe amalabhorethri; nocwaningo Translational, elihlanganisa amabili.
Lezi zindawo ezinhlanu ngaphakathi lokuhlushwa Isayensi Biology-Health kukhona: umdlavuza, Biotherapy / Immunotherapy / transplantation, Physiopathology / esilingene zokwelapha, UMnyango Wezempilo Yomphakathi / Epidemiology futhi Medical Imaging.
I-Faculty of Ikhemisi campus, okuyinto nesembozo 90,000 m2, ungaphakathi Chatenay-Malabry. Kuyinto cishe ikhaya 3,500 abafundi, babo 450 balandela okuvame Ngonyaka wokuqala izifundo ngesayensi impilo. Iziqu baqashwe bangalindela ukuthola umsebenzi Pharmacy, dispensaries, umkhakha, eziphilayo kanye izibhedlela.
Okuxhunyanwa ucwaningo Igxila emisha zokwelapha, eyenziwa amaqembu kanye laboratories elibonakalayo ubuhle babo yizinhlangano ezinkulu ucwaningo njenge CNRS futhi Inserm, futhi Ministry of Research.
Paris-Sud Faculty of Ikhemisi ingenye ekhemisi zezemfundo izikhungo ngobukhulu ucwaningo eFrance.
Zikhona phezu 9,000 abafundi e-Faculty of Science e Orsay, izibalo, isayensi yekhompyutha, physics, chemistry, biology, umhlaba isayensi nesayensi of the Universe.
Faculty yakhiwa 47 laboratories zocwaningo, iningi labo sikanye CNRS, Inserm, Inra, Inria kanye Curie Institute.
Eminyakeni yamuva ubuhle ucwaningo yayo kwi-mathematics iye angibusise Amamedali ezimbili Fields, unikelwa Wendelin Werner e 2006 futhi Ngo Bao Chau Ukuphrinta 2010; nocwaningo physics ubelokhu eqashelwa uMklomelo KaNobel, unikelwa Albert Fert e 2007.
I-Faculty of Science sise inhliziyo campus Orsay, isayithi ezehlukile okuhlanganisa ingadi Botanical.
Faculty of Ezemidlalo Sciences
Nge eduze 1,100 abafundi, Faculty of Ezemidlalo Sciences (STAPS) inikeza eziningi izifundo ngamakhasimende-career zabafundi asebavele ngezinga, kanye degrees ezi degrees sokufundela Master.
Ucwaningo ligxile ngokwengqondo, izinqubo bokuphila lwezenhlalo ngemuva motricity womuntu lapho indima enkulu ekuthuthukiseni ukusebenza kwezemidlalo.
Kuyinto Faculty kuphela eFrance Sikolo zobudokotela ngoba “Isayensi Wezemidlalo Human Motricity”.
Cachan IUT ine phezu 900 abafundi, ngokoqobo, futhi eminye abaqeqeshwayo ezemfundo Ubunjiniyela Electrical, Industrial Computing, Mechanical Engineering nokukhiqiza ikhompyutha Kuqiniswe.
Iziqu baqeqeshiwe bakwazi ukungena kwimakethe yokuphehla umsebenzi ochwepheshe noma onjiniyela njengoba onekhono emasimini yamabhanoyi, zokuhamba, ophinde uvuseleleke, ukuphathwa wokwakha lobuchwepheshe, domotics, ezokuxhumana, instrumentation bezokwelapha, Biomechanics, ukukhiqizwa, yesondlo, Logistics, ekuklameni amarobhothi futhi imikhiqizo zezimboni ukuhweba.
Abafundi zisekelwa imfundiso ubuhlakani abaqeqeshiwe futhi imboni ochwepheshe.
I IUT ifakwe ezintathu state-of-the-art ubuchwepheshe ezisekelweni.
I Sceaux IUT izitimela phezu 1,500 abafundi ebhizinisini nokuphatha ekuphathweni, ukuphathwa, futhi ukuhweba kanye yokuthengisa ubunjiniyela. idumela layo elihle kakhulu okuthuthukiswa oxhumana eduze ke igcina nemboni kanye ibhizinisi. nekharikhulamu yayo umsebenzi-igxile ifundiswa ubuhlakani zezemfundo kwezomnotho nokuphatha kanye ngochwepheshe kusukela kwezamabhizinisi.
A iFundo Centre inikeza ukuqeqeshelwa degrees ehlukahlukene amadiploma.
I Orsay IUT kuyinto ehamba phambili ukuqeqeshwa isikhungo kwamakhemikhali, isayensi yekhompyutha, futhi isicelo physics kanye izinyathelo.
Ziphethe eziphambili kakhulu ubuchwepheshe ezisekelweni, inezinhlobo 1,100 undergraduates, ngokoqobo futhi eminye abafundi imfundo. I IUT inakekela cwaningo / umsebenzi internship iminyaka engamashumi amane, sibonga izibopho zayo obuseduze umkhakha.
Ucwaningo kwenziwa amalabhorethri ezintathu: lo Laboratory of Yamamolekhula Ukuhlaziywa Instruments futhi Techniques (leti); Ukuhlaziya Guqula Economic, Ukwaziswa kwesimanje, futhi Izinkampani (IHHOVISI); kanye Laboratory of Interfaces Nokuhlala Ngokwahlukana Izinqubo (INTERSEP).
Njalo ngonyaka phezu 650 abafundi bangenza eSikoleni of kwa Paris-Sud University. Omunye kokuhle onjiniyela Polytech wukuthi kulo ukuqeqeshwa kwabo zingabantu sisondelene emhlabeni zocwaningo, ngaleyo ndlela athole cutting edge ulwazi ngobuchwepheshe Amasimu (electronics kanye izinhlelo esishunyekiwe, Ihluzo Elingafaki Ukuqoka, ikhompyutha engineering, izinto zobunjiniyela futhi phototonics), kanye zokuxhumana, ulimi, nokuphathwa amakhono zonke izidingo unjiniyela.
Ngaphezu lwezifundo ezivamile, lapho abafundi ukuqala izifundo zabo ngemuva kokuqeda i kokuqala izifundo zeminyaka emibili-, Paris-Sud Polytech inikeza ithuba ukuthola degree ngokuhlanganisa ezikoleni internships, noma ngokusebenzisa ukufundela umsebenzi, nomake nge eminye izinhlelo zemfundo.
Ngemva kweMpi Yezwe 2, nokukhula ngokushesha womkhakha wesayensi yenuzi kanye ne-chemistry kwakusho ukuthi ucwaningo oludingekayo accelerators ngaphezulu nonamandla, okuyinto edingekayo izikhala ezinkulu. I-University of Paris, the ecole normale Supérieure kanye College de France Ingabe bonke ekufuneni isikhala eduze Orsay, eningizimu Paris.
Parc de Launay e Orsay (160 hectares) yathengwa nguMbuso.
Waqala ukwakhiwa ku Institute of Physics Nuclear (Nuclear Physics Institute) kanye Linear Accelerator Laboratory (Ukuthuthukiswa Accelerator Laboratory) ngu umakhi Seassal, ngaphansi kokuqondisa yesayensi kaJosefa Peres, Irène futhi uFrédéric Juliot-Curie futhi uHans von Halban.
cyclotron Ikolishi de France ka-, elakhiwa ngo 1937, washukumiseleka ukuba Orsay.
Imishayo lokuqala accelerators entsha French laqala ukusebenza (le 157 MeV synchro-cyclotron futhi Linear Accelerator).
I-Faculty of Sciences Paris idluliselwe abanye umsebenzi wayo lwemfundiso Orsay. Ukwanda okusheshayo e abafundi kwaholela ekubeni Orsay Centre yokuba labatimele 1 kuMashi, 1965.
I-University of Paris-Sud 11 yasungulwa lapho izikhungo ngesikhathi Orsay, Chatenay-Malabry, seal, Cachan futhi Kremlin-Bicêtre aye ahlanganiswa namanye.
Emagcekeni Orsay waqala wokwandisa Moulon ithafa futhi ezakhiwa laboratories entsha. Cishe zonke lezi beniyingxenye Paris-Sud University, nakuba babebuthene ngaphezulu ihlobene ngokuqondile CNRS noma University of Paris VI.
Ngenxa budebuduze Paris-Sud University kuya Atomic Energy Institute (Cea) futhi lawo amalabhorethri CNRS e Gif sur Yvette, nezikhungo eziningi laboratories, kanye nezikole zezemfundo like Polytechnique, HEC, ESC, ENSTA nabanye wabuye weza kule ndawo. Ngenxa yalokho, the Vallee de Chevreuse isibe omunye izici ezibaluleke kakhulu futhi owaziwa eYurophu ucwaningo lwesayensi.
Uyafuna xoxa University of Paris-Sud ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
University of Paris-Sud kumephu
Izithombe: University of Paris-Sud Facebook ezisemthethweni
University of Paris-Sud Izibuyekezo
Joyina ukuxoxa University of Paris-Sud.